Ndeupi musiyano pakati peAmazon UK Vendor Central uye Amazon UK Sales Central?
Mubvunzo watinowanzonzwa kubva kune vatengi vedu unonzwika se "Ndechipi musiyano pakati peAmerica Vendor uye Sales Central?" Iyo inyaya yakakakavadzana iyo inoda kuongororwa kwakajeka kwezvinhu zvose zviri zviviri. Muchikamu chino, tichaedza kuongorora kuti zvipi zvingakubatsira kushandisa aya ma Amazon mabhuku ekutengeserana uye kuti angakanganisa sei bhizinesi rako richikura.
Unogona kuwana dzakawanda nyaya uye nhaurirano inobva pachikamu chino. Zvisinei, chii chinoshandiswa kuva chakajeka chave chichiwedzera zvakaoma nekuda kwekupedzisira kuchinja kuma Amazon Brand Registry - з днем народження мужчина. Parizvino, Amazon maitiro ehurongwa anotora zvimwe zvikamu, mitemo, mari, nemitemo.
Saka tinonzwa chido chakasimba chokukurukura musiyano pakati peAmerica UK vendor pakati nepakati rekutengesa mushure mekupedzisira yekugadzirisa zvishandiso zvegorongeramu uye zvinyorwa.
Nyaya ino inobatsira kune avo vane vatengi vane kambani nezvekutengesa neVendor Central kana avo vanoda kuchinja kubva kuMutengesi pakati peVendor pakati kana vhesi. Saka, regai tiende mberi.
Chii chinonzi Amazon Vendor Central?
Amazon Vendor Central is Amazon online interface iyo inoshandiswa nevashambadzi nevatengesi. Kana uri kutengesa zvinhu zvako kuburikidza neiyi Amazon purogiramu, iwe uri mutengesi wekutanga. Zvinoreva kuti iwe hauna hanya nekutumira zvishoma, iwe uri kutengesa muzhinji. Iyi purogiramu yakanakisisa kune vakukuri vakura vane mafekitari avo. Iwe unogona kunyoresa pa Amazon Vendor Central chete nekukoka. Kana iwe ukaona mutsara unoti "Ngarava dzinobva uye dzinotengeswa neAmazon.com" pane peji yezvigadzirwa, zvinoreva kuti inobatanidzwa muAmazon Vendor Central.
Maererano nehurongwa uhwu, Amazon inoshandisa mirairo yako yese uye inovatumira kune mamwe mabasa ekuchengetedza maitiro munyika yose. Uyezve, Amazon inotengesa zvinhu uye inozadzisa mirairo yega.
Zvakanakira Amazon Vendor Central
Pakati pezvikomborero zveApple Vendor Central program, tinogona kuverenga nyore, kuziva uye kuchengetedza. Saka regai tikurukure zvinhu izvi zvakajeka.
Pandinenge ndichitaura pamusoro pokusava nemafungiro, ndinoreva kuti Amazon inoita zvinhu zvose kwauri. Zvese zvaunoda kuita ndekutengesa mazano makuru kuAmazambique uye kutakura zvinyorwa kunzvimbo dzokuchengetera..Amazon inobata zvose zvinozadzikisa uye inodzoka.
Rimwe ruzivo ruzivo uye ruzivo. Amazon inoshandisa nyore nyore-up wholesales model maererano nezvamungagona kutaurirana nemashoko mberi.
Zvakare, maererano nehurongwa uhwu, Amazon inotora zvinhu zvako uye inoita zvose zvakanakisisa kuti uzvitengese kupfuura zvinotengeswa zvevamwe vatengesi vatengesi avo Amai Amazon vanofanira kugovana nayo mari yavo.
Saka, sezvo Amazambique anozvitsvakira zvido zvayo, vatori vechikamu purogiramu yeAmazon Vendor Central vanowana zvikomborero zvakawanda zvakadai se:
Maitiro eAmazon anopa zvipo zvake;
"Ngarava dzinobva uye dzinotengeswa neAmazon.com" mishonga inoita kuti munhu awedzere kuvimba uye kuvimba;
Amazon Kutsigirwa (inoshandiswa nguva dzose inotumirwa panguva, uye Amazon inotora mabasa ose evatengi uye zvikwereti);
Amazon zvinhu zvinowanzoshandisa Bhokisi Rekushandisa zvikonzero zvinonzwisisika;
Amazon inokupa hukudzivirirwa zvakakwirira sezvauri iko zvino vebhizimisi.
Zvakare, uchishandisa purogiramu iyi, unogamuchira kuwanikwa kweAmerican Marketing Services (AMS) uye mamwe matanho ekutengeserana okutanga asati awanikwa mukati meimwe hurongwa hwekutengesa. Iwe unogamuchira mukana wokushandisa Amazon A + chirongwa chekuita uye Amazon Vine. Zvishandiso izvi zvichakubatsira kuti uwedzere kutengesa kwako kusvika kune 10% uye wedzera chizivo chako chekuziva.
Nheyo dzisina simba dzeAmazon Vendor Central
Chikuru chinodarika purogiramu iyi ndeyemashure mazasi. Iwe unofanirwa kubhadhara mari yakawanda yeAmazon services, saka purofisi yako inogona kunge yakaderera kudarika yako yekupedzera kwekutanga. Uyezve, une chero sarudzo pamusoro pemutengo wako wekutengesa uye haugoni kuisa mari shoma.
Chimwe chinhu chakaipa ndechokuti iwe une nzvimbo shoma yemisika pamisika. Zvose zvekutengeserana kwako zvinogona kungovakirwa pa Amazon.com chete. Kana iwe uchida kutengesa zvinhu zvako kune mamwe maAfrican subdomains, iwe uchada kuumba mamwe vatengesi vekodhi.
Maererano neyiyi purogiramu yeAmazon, haugoni kutarisa uwandu hwekuverenga. Zvinoreva kuti haugoni kubatsirwa nekuwedzera kudiwa kwezvinhu zvako uye vhesi iyo kana zvishandiso zvako zvisingafambi nokukurumidza, Amazon inogona kukubhadhara kuti uchengetedze (nguva yakawanda iwe usingakwanise kuitengesa, iyo yaunenge uchikwanisa kuitenga) .
Chimwe chikamu chisina simba chepurogiramu iyi inononoka kubhadhara. Iwe unogona kuwana mubhadharo wako mukati memazuva 60. Kana uchida kuzviwana zvishoma zvishoma, f.i kwemazuva makumi matatu, iwe uchada kubhadhara 2% mari. Uyezve, pane zvimwe zvakawanda zvekubhadhara mari dzakadai seMark Market Development uye mari yekuiswa.
Kusiyana neAmerican Seller Central, Vendor Central haina kupa chero kuongorora nekutsvakurudza..Vendor Central Analytics inogumira uye haina kuratidza mufananidzo wakazara wekuvapo kwako kwemusika. Uyezve, unogona kutarisa chero data pamusoro pevatengi vako. Zvinorambidzwa kuti utaure nevatengi vako. Chero nyaya dzevatengi dzinogadziriswa neAmerica Customer Service.
Kugumisa zvose zvakataurwa pamusoro, ndinoda kutaura kuti Vendor Central anogona kugutsa zvido zvebhizimisi rako kana iwe uri muveki anonyanya kutsvaga ari kutsvaga imwe yemusika. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, uchawana mukana mukuru wekuwedzera chizivo chako chekuziva uye kuvandudza maitiro ako ekutsvaga uyewo kuwana mukana wekutarisa pakugadzirwa, kuve nekuvandudza, nekuzvivandudza. Kushandisa purogiramu iyi, haufaniri kunetseka nezvekutumira, kutsigirwa nevatengi uye mamwe mabasa anowedzera nguva iwe waunoda kuita semutengesi wechitatu.
Chii chinonzi Amazon Seller Central?
Amazon Seller Central ndiyo inoshandiswa neAmerica nechinangwa chekubatsira vatengesi vekutengesa kutengesa uye kutengesa zvinhu zvavo kuvanoshandisa Amazon. Kazhinji, Amazon Seller Central inoshandiswa kubatsira rubatsiro rwechitatu, uye vatengesi vemisika vanosimudzira nzvimbo dzavo uye mari.
Kushandisa Amazon Seller Central, une zvinhu zviviri zvekuzadzikisa mirairo yaunowana kubva kune vatengi vako. Iwe unogona kutora kutumira nemasevisi evatengi iwe pachako kana kuti kuvimba zvachose neAmazon munyaya iyi. Panyaya iyi, Amazon ichabata izvi nokuda kwako nekunyora zvigadzirwa zvako muZvinozadziswa neAmerica program. Chimwe chikonzero chinowanzoshandisa Amazon Seller Central inyanzvi yekudzora mameseji emidziyo yako nechinangwa chekudzivirira kutengesa zvinhu zvako nevamwe vasingazivikanwi vatengesi vechitatu.
Kusimbiswa kweAmerica Seller Central
Maererano nehurongwa uhwu, uri kutengesa zvikamu zvega kuAmerica vatengesi kuburikidza nemusika mumwe chete. Ndicho chikonzero tinogona kutaura kuti purogiramu iyi yakanakisisa kune vatengesi vekutsvaga vekutengeserana kwevechitatu vasina hanya nekutengeserana kwekutengesa. Icho chirongwa chinoshandiswa uye chinoshandiswa nevashandisi chinoita kuti vatengesi vakawanda vave nemabasa ekudzora. Iyo yakazarurirwa ma Amazon yose vatengesi, saka haunoda chero mapepa.
Pane zvingasarudzwa zviviri zvaunogona kusarudza uchishandisa iyi purogiramu Amazon:
chirongwa chekutengesa mumwe nomumwe
Maererano neurongwa urwu, haufaniri kubhadhara mari yekubhadhara. Zvisinei, nguva imwe neimwe paunotengesa chigadzirwa, unofanirwa kubhadhara $ 0.99 mari yeAmazon..Tichifunga nezvehuwandu hwemabasa aunowana nekuda kwemari iyi, mutengo uyu unoratidzika.
Uchishandisa chirongwa ichi, unofanirwa kubhadhara kunyoresa kwemwedzi. Zvinodhura $ 39.99 pamwedzi uye hazvidi chero chimwe chezvinhu-chimwe chinhu.
Kushandisa ASC, unogamuchira mitsara yakakwirira uye uzere hwakakwana pasi pemitengo yako. Iwe haufaniri kubhadhara mari chero ipi zvayo sezvo vese vese vanoita, saka unoita uye unoramba uchiwedzera pane imwe neimwe inotengwa chinhu.
Zvakakosha kutaurwa Amazon Seller Central inoshanda pamwe neAmerican FBA program. Zvinoreva kuti iwe unogona kusarudza kuva neAmareji yekuchengetedza zvinhu, kugadzirisa mairairo, uye iwe pachako kutarisira makambani ekubatsira uye kudzoka.
Rimwezve rubatsiro nderokuti iwe unogona kutora chikwereti munguva pfupi (kusvika kune usina simba).
ASC inogona kushanda senhare yekuongorora uye yekubika, ichikupa nhoroondo yakakodzera yekubika nguva dzose. Uyezve, iwe unogona kuwana deta yehuwandu hwemashoko pamusoro pevatengi vako uye taura navo kuti ugadzirise chero nyaya. Zvisinei, uchishandisa purogiramu iyi yeAmazon, iwe unotarisira kwete chete pasi pekutengeserana kwevatengi vako asiwo pasi pekuverenga kwako. Zvinoreva kuti iwe unogona nyore nyore kuyeuka kuverenga kwako kubva kuAmazon kana uchida kubvumira kune imwe nzvimbo.
Kukanganisa kweAmerican Seller Central
Chokutanga pane zvose, zvakakosha kutaura kuti chirongwa ichi hachina kusununguka uye chinogona kuonekwa chakadhura mabhizimisi maduku. Uyezve, zvose zvirongwa zvevanhu uye zvemhizha zvinoda mari yakawedzerwa inoshandiswa pamakisi akasiyana-siyana emakethe nemapoka.
Chimwe chikamu chisina kunaka chepurogiramu iyi ndechekuti kana uyo anenge ari mubatsiri weAmerica kuzadzika kwechigadzirwa, unogona kuwana mari yekuchengetedza mukuchengetedza. Inogona kuva dambudziko kune vatengesi veAmazon vane zvinhu zvakagara nguva refu.
Zvisinei, dambudziko guru mupfungwa dzangu nderekukwikwidzana kwemakethe. Chero ani zvake anogona kuve Amazon mutengesi wechitatu wekambani uye zuva rimwe nerimwe mari yavo inowedzera. Kana zvinhu zvako zvakagadzirwa nemakwikwi emakwikwi emakiti, iwe uchapedza nguva yakawanda pamatengo ehondo uye kuderedza zvigadzirwa zvako. Uyezve, Amazon inogona kutengesa zvinhu zvakafanana sezvaunotengesa, kuve wako mukukwikwidzana weK Market wausingazombokwanisi kubuda.